Soo celinta iPhone / iPad kaga imaanayo iCloud weligii Sidaas Easy
Mararka qaarkood, inkastoo ay aad dadaalka ugu wanaagsan oo dhan, waxaa sidaas dhici kartaa in aad iPad ama xitaa aad iPhone shil taasoo keentay in khasaaraha xogta laga yaabaa. Inta badan, waxaan heysanaa files xasaasi ah ee qalabka aynu ka dhigan tahay in aad waa in la doonayo si loo soo kabsado xogta aad laga badiyay.
Tani waa meesha files gurmad soo galay ciyaarta. Marka aad qabtid iCloud dib on noqdeen, waxaad awoodi doontaa inay ka soo kabsadaan xogta aad lumay by celinta ilaa dib aad. Haddii aadan aqoon sida loo sameeyo, raac tallaabooyinka fudud oo aan la halkan taxay doonaa.
A iPhone / iPad cusub Celinta ka gurmad iCloud jira
Marka aad raadinayso in la soo celiyo ah qalab cusub tufaaxa (iPhone / iPad) la gurmad ah oo gaboobay, aad u baahan tahay si ay u raac tallaabooyinkan fudud.
• In qalab aad, madaxa si 'Settings ". Waxaa Under, guuraan 'General' ka dibna hubiyaan 'Update Software'.
• Hubi in aad telefoonka ayaa update software ugu danbeeyay si ay u sii wadi lahaa tallaabooyinka.
• Haddii aadan haysan update ka, download ugu dambeeyey oo ku xidh.
• Hadda, waxaad u baahan tahay in ay dib ugu soo laabtaan "Settings" ka dibna ku dhuftay on 'iCloud'. Under 'iCloud', guuraan 'Kaydinta' ka dibna eeg Maamul Kaydinta '.
• Waxaad ka heli doontaa liiska faylasha gurmad iyo waa in aad baadhid gurmad ugu dambeeyay taas oo aad rabto in la soo celiyo.
• Hadda, dib in ay mar kale 'Settings "ka dibna ku biiro' General '. Sida fursadaha ku qoran, guji "Dib u celi 'ka dibna dooran,' masixi content oo dhan iyo goobaha '. Tani waxay kaa caawin doonaa in dib u soo celinta ah iPhone / iPad cusub.
• Madaxa in kaaliyaha dhigay ilaa iyo dooran 'samaysay qalab aad'.
• Waxaa lagu keentay in doonaa inaad geli aqoonsiga iCloud oo aad u baahan tahay si ay u galaan.
• Hadda, waxa aad ka arki kartaa files gurmad oo aad dooran kartaa kuwa aad rabto inuu ka soo kabsado,
• Riix "Soo Celinta gurmad 'oo aad noqon doontaan si loo soo celiyo iPhone cusub ah oo gurmad jira iCloud awoodaan.
Soo Celinta xogta ka iCloud gurmad eegista
Haddii aad raadinayso in ay doorato eegista celin gurmad ka iCloud, waad isticmaali kartaa heer sare ah Wondershare Dr.Fone ee macruufka. Waa mid ka mid ah software ugu sareeya kaas oo noqon doona in ay si degdeg ah oo siyaabo kala duwan. Halkan waxaa ku qoran qaar ka mid ah qaababka ugu sareeya kaas oo bixiya.
• Waa iPhone / iPad qalab kabashada xogta caawisaa soo celinta xogta waxaa la qalad ah laga badiyay tan iyo ka dib, la tirtiro ama xataa formatted.
• Waxaad ku eegaan karo files hortooda ku soo kabsaday.
• Waxaa jira qaabab kala duwan oo uu ka soo xulan soo kabashada.
• Waxaad soo kaban karto, wax badan oo ka mid ah qaabab file kala duwan. Halkan waxaa ku qoran faahfaahin ah.
• Waa fududahay in la isticmaalo iyo waxay u baahan tahay ama wax yar aqoon farsamo.
Iyadoo qaababka aad u badan, ay caanka ah ee qalabkan waa cudur daar. Marka aad raadinayso in la soo celiyo hayaan ee eegista, halkan waa tallaabooyinka aad u baahan tahay in la raaco.
• Ku rakib Wondershare Dr.Fone ee macruufka ah ee aad PC oo abuurtaan.
• Dooro 'hab kabashada' doorasho ee shaashadda guriga.
• Dooro 'ka soo kabsado iCloud gurmad' ka fursadaha.
• Waxaa lagu keentay in doonaa inaad geli aqoonsiga login iCloud.
• Buuxi faahfaahinta iyo login aad iCloud. Software Tani ma dukaamada wax ka mid ah aqoonsiga login aad.
• Marka aad qortey, waxaad ka heli doontaa liiska faylasha gurmad kala duwan oo la joogin in aad xisaabta iCloud.
• Dooro gurmad ah oo aad rabto in la soo celiyo oo guji badhanka download oo la joogo ku xiga si ay faylka dib u doortay kor u noqon lahaa.
• Waxaad ka heli doontaa shaashad weydiinaya in aad doorato faylasha aad rabto inuu ka soo kabsado. Waxaad dooran kartaa 'doortaan oo dhan laakiin doorashadan rasmiga, waqtiga ugu dheer.
• Sida habboon, waa in aad xulan dhammaan faylasha kuwa aad rabto in aad soo kabsado iyo in la yareeyo waqtiga guud scan.
• Ka dib markii qaar ka mid ah ayaa soo maray iyo scan la soo gabagabeeyo, waxaad arki doontaa liiska faylasha joogay in qalab aad.
• Waxaad ku eegaan karo files ka dooro kuwa aad doonaysid in la soo celiyo.
• Hadda riix kabsadaan ka dibna geli wadada meesha aad rabto in uu kaydiyo faylasha.
Waxaad si guul ka soo dhacsaday files lumay ka file dib doortay kor.
Ma u baahan tahay in ay tirtirto kaabta iCloud
Sida loo Isticmaalo iyo Save Documents in iCloud
Afar xal waa in aad ogtahay in ay dib u kor sawiro aad u daruur.
> Resource > iCloud > celinta iPhone / iPad kaga imaanayo iCloud weligii Sidaas Easy